निर्मला पन्तको पोस्टरले यसरी रंगियो, महेन्द्रनगर ।
निर्मलाको परिवारप्रति ऐक्यवद्धता जनाउन डा. केसी कञ्चनपुरमा
महाकाली अञ्चल अस्पतालको दुर्दशाः न विशेषज्ञ डाक्टर न एम्बुलेन्स !
कञ्चनपुरमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु !
‘निर्मलाका बुबाको हत्या गर्ने षडयन्त्र गरियो !’
निर्मलाका बुवा यज्ञराजलाई उपचारका लागि काठमाडौं लगियो
अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका निर्मलाका बुबामा देखियो मानसिक समस्या !
अपराधीहरुको मालिसले मस्त निद्रामा सरकारः संग्रौला
च्याउ खेतीः बीउको माग धेरै, उत्पादन थोरै
निर्मला हत्याकाण्डमा सरकार उदासिनस् !!
निर्मला हत्याकाण्डः शंकास्पद ४ जनाको डीएनए पनि मिलेन !
अनिश्चितकालिन धर्नामा बसेका निर्मलाका आमाबुवा बिरामी !
निर्मला हत्याकाण्डः छोरीका निम्ति न्याय माग्दै आमाबाबु नै अनिश्चितकालीन धर्नामा !
पश्चिमी सिमानाका गड्डाचौकीमा प्रहरीको ‘कुकुर’ परिचालन !!
दशैँ, तिहार मान्न घर फर्किनेको गड्डाचौकीमा लर्को
सामान्य बन्दै महेन्द्रनगरको अवस्था, प्रहरीको दमन विरुद्ध विद्यालय बन्द !!
महेन्द्रनगर/ भदौ ८
तीन दिनदेखि तनावग्रस्त बन्दै गएको महेन्द्रनगरको अवस्था शुक्रबार केही सामान्य बनेको छ । स्थानीयको माग अनुसार सीडीयो र प्रहरी प्रमुखहरुको सरुवापछि महेन्द्रनगरको अवस्था केही सामान्य बनेको हो ।
तीन दिनदेखि ठप्प रहेको यातायात सेवा शुक्रबार बिहानैबाट संचालनमा आएका छन् भने पसलहरु पनि खुल्न थालेका छन् । तर, स्थानीय प्रशासनले भने सम्भावित प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै बिहानैदेखि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ ।
यता, प्रहरीको दमन विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउदै एकदिनका लागि विद्यायल बन्द गरिएको छ । निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा भैरहेको आन्दोलनमा प्रहरी प्रशासनबाट दमन भएको भन्दै जिल्लास्थित प्याप्सन, एनप्याप्सन आवद्ध विद्यालयले बन्दको घोषणा गरेका हुन् ।
बिहीबार स्थानीयको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो । प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ३ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये सन्तोष कुमार कठरियाको महाकाली अञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
यस्तै घाइते अन्य दुईजना अर्जुन भण्डारी र तेजराज भट्टलाई थप उपचारका लागि कोहलपुर मेडिकल कलेजमा रिफर गरिएको थियो । अर्जुनको कोहलपुरमा उपचार हुन नसकेपछि काठमाडौं पठाइएको छ ।
साभारः उज्यालो अनलाइन
Lal Badhur Dhami
नेपाली फिल्मी गीतहरु
Copyright Radio Kanchanpur 2015.All Rights Reserved.